Ikike nke onye mkpagbu imegide nnọpụiche ya - Rabbi Michael Avraham
Ikike nke onye mkpagbu imegide nnọpụiche ya
Nzaghachi > Atiri: Halacha > Ikike nke onye mkpagbu imegide nnọpụiche ya
aṅụrị Ajụrụ ya ọnwa 3 gara aga
O doro anya na ọ bụrụ na e nwere mitzvah maka onye ọ bụla iji wepụ onye na-akpagbu ahụ, mgbe ahụ enwere mitzvah maka onye na-akpagbu onwe ya ka ọ ghara imegide nkwụsịtụ ahụ? Ka onye mkpagbu ahụ ọ ka nwere ikike imegide nnọpụiche ahụ (na ọbụna ruo n'ókè nke igbu onye na-ese ihe)? Ọ dị m ka ọ nweghị ntụaka maka nke a na Iwu Mishnah Torah nke onye ogbu mmadụ na nchekwa nke mkpụrụ obi, Isi nke A.
Mkpado ajụjụ: onye na-achụ
Okwu a na-apụta na ndị na-abụ abụ. Gemara na-ekwu na ọ bụrụ na ọ kwaturu ma gbuo Pinchas site na steeti mkpagbu na ọ gaara ahapụ ya. Na na Malam F.A. Mahal onye ogbu mmadụ na-ekwu maka ndọtị nke iwu a (kedu maka onye ogbu mmadụ mberede nke na-egbu onye nzọpụta nke ọbara, na onye gburu onye ozi n'amaokwu nke abụọ ga-atụlekwa).
Onye mkpagbu enweghị ikike imegide nnọpụiche dị ka o nweghị ikike igbu mmadụ. N'ezie ya onwe ya ga-egbu onwe ya site na ọnọdụ mkpagbu (ma ọ bụ n'ezie kwụsị ịkpagbu). Otu a ka m kọwara ebe a izu ole na ole gara aga iwu na n'ime onye ozi nọ na BD enweghị ikike igbu ya n'ihi na onye a na-azara ọnụ n'onwe ya ga-egburịrị onwe ya. Igbu ndị omempụ bụ mitzvah amachibidoro ọha na eze, na onye ozi B'D bụ onye ozi nke mmadụ niile (gụnyere ndị a kpagburu).